Nanolana vadina zandary: Olona dimy nidoboka am-ponja aty Miandrivazo
lundi, 23 décembre 2019 14:23
Niharan’ny fanolanana tambabe, miaro herisetra ny vehivavy iray, vadina zandary miasa ao amin’ny « Poste Avancé » Manambina, Distrikan’i Miandrivazo, ny alin’ny 14 desambra 2019. Tao an-tranony, izay miala 800m ny tobin’ny zandary, ilay ramatoa sy ny zanany kely no notafihin’ny telo lahy sady nanao ny herisetra ara-nofo. Tsy teo an-toerana ilay Zandary vadiny tamin’io andro io fa tany ampamitana iraka fampandrian-tany.
Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny kaompanian’ny zandary Miandrivazo vao nahazo fampandrenesana momba ity herisetra ity. Nandeha ny fikarohana. Niisa 28 ireo olona nanaovana fanadihadiana, ka anisany ny tena tompon’antoka tamin’ny fanolanana.
Natolotra ny Fitsarana taty Miandrivazo ny zoma lasa teo ny 5 tamin’izy ireo taorian’ny famotorana. Notazomina am-ponja vonjimaika avokoa izy ireo, ka ny roa tena nandray anjara nivantana tamin’ilay herisetra ara-nofo, ny roa hafa nanara-maso ny manodidina, ary ny iray no atidohan’ity asa ratsy ity.
Tsaboina ao Antsirabe kosa ilay vadina zandary niharan’ny fanolanana sy herisetra. Nitsidika azy tany an-toerana ny komandin’ny Zandarimaria mivady.